Civil society marks 1-year of world’s longest internet shutdown — မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရမှုသည် ကမ္ဘာ့အရှည်ကြာဆုံးဖြစ်ကာ တစ်နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် သို့ ရောက်ရှိလာသည့်အပေါ် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် – Free Expression Myanmar
Jun 21, 2020 by Coordinator	in Campaigns စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး
Today, 21 June, is the first anniversary of the shutdown of all mobile internet access in Myanmar’s Rakhine and Chin States. This is the longest internet shutdown in the world. Approximately 1.4 million people in eight townships in those States are suffering from the ongoing violation of their economic, social, cultural, developmental, political, and civil rights.
The Myanmar government has claimed the shutdown is for national security. However, there has been no evidence that the decision has reduced the ongoing conflict. Instead, it has caused significant harm to civilians in one of the least developed regions of Myanmar, during the global COVID-19 pandemic. It has been internationally condemned as disproportionate, including by the UN.
We condemn the continued shutdown and call on the government to immediately lift all restrictions on internet access and to restore telecommunications unconditionally to full capacity. We also call on the government to:
Immediately reinstate access to the internet in the remaining eight townships in Rakhine and Chin States
Review Articles 77 and 78 and other Articles of the 2013 Telecommunication Law, and amend them to be in line with human rights standards
Refrain from restricting internet access and bandwidth restrictions in the future, either in these currently affected areas or elsewhere in Myanmar, including in other conflict areas, and during periods of elections.
Action For Dignity and Development(ADD)
Action Labour Rights
African Freedom of Expression Exchange (International)
Africa Open Data and Internet Research Foundation (International)
Araken CSO Network
Arakan League for Democracy (KyaukPyu)
Blue Moose Publications (UK)
C.A.N-MYANMAR and PFLAG-MYANMAR
Campaign for Human Rights and Development International (CHRDI - Sierra Leone)
Center for Environment and Resources Development in Arakan (CERDA)
Centre for Law and Democracy (International)
Center for Media Studies and Peacebuilding (CEMESP - Liberia)
Charity Youths Organization
Chin CSOs Forum
Citizen Right Action Group - CRAG
Myanmar Consumers Union (MCU)
Dr. Saw Mra Aung Foundation
Free Media Movement (FMM - Sri Lanka)
Future Young Pioneer Organization (FYPO)
Gender and Development Advocates (GANDA - Philippines)
Genuine People’s Servants (GPS)
Ingyinmay Hindu Women Association
International Federation of Journalists (IFJ - international)
Internet Sans Frontières (International)
Kadu Youth Development Association
Media Foundation for West Africa (International)
Mon Women’s Organization
Nam Khone Alumni Network
Oway Education and Youth Institution
PEN America (International)
Rakhine Lives Matter
Rakhine Youth New Generation Network
Right2Know Campaign (South Africa)
ROAD ( Remove Obstructions Against Democratization)
Search for Common Ground (SFCG - International)
Social, Education and Development Association - SEDA
Software Freedom Law Center (SFLC - India)
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet - Indonesia)
Swe Tha Har Organization
Theikkhar Myanmar Institute
Thint Myat Lo Thu Myar ( Peace Seekers and Multiculturalist Movement)
Twel Let Myanmar
World Bank (international)
Yemeni Organization for Development and Exchange of Technology (YODET - Yemen)
ရခိုင့်မျိုးဆက်သစ် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့
သန္တာရင်သွီး လူငယ်ပရဟိတ အသင်း
အုန်းတော ပရဟိတ ဖောင်ဒေးရှင်း
On 20 June the Ministry of Transport and Communications (MoTC) issuedadirective toward all mobile phone operators - MPT, Mytel, Telenor and Ooredoo - to temporarily suspend mobile internet service in the conflict-ridden townships of Rakhine and Chin States, effective at 10:00 PM (local time) on 21st June.
ယနေ့ ဇွန်လ (၂၁) ရက်နေ့သည် ရခိုင်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု စတင် ဖြတ်တောက်ခံရမှုသည် တစ်နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ ဤအင်တာနက် ဖြတ်တောက်ခံရမှုသည် လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာ့အရှည်ကြာဆုံးသော အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုဖြစ်ကာ အဆိုပါပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ် (၈) မြို့နယ်မှ ၁.၄ သန်းခန့်သော ဒေသခံပြည်သူတို့သည် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နိုင်ငံရေး နှင့် နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးများအား ချိုးဖောက်ခံရခြင်းကို ကြုံတွေ့ခံစားနေကြရသည်။
မြန်မာအစိုးရသည် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုအား နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက်လုပ် ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင်မူ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ယခုဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ပဋိပက္ခအား လျော့ပါးသွားစေသည်ဟူသော အထောက်အထား မတွေ့ရှိရပေ။ ထိုဖြတ်တောက်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်အကျဆုံးသော ဒေသများတွင်ရှိသော ဒေသခံလူထုအား ယခုဖြစ်ပွားနေသော COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းတွင် ဆိုးရွားသောထိခိုက်မှုများကို ကြုံတွေ့စေသည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် သင့်လျော်မှုမရှိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံတကာမှ ရှုံ့ချခဲ့ကြသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုအား ရှုံ့ချလိုက်ကာ အစိုးရအား ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုများအား ချက်ချင်းရုတ်သိမ်းပြီး စွမ်းရည်ပြည့်ဝသော ဆက်သွယ်ရေးလိုင်း များအား အကန့်အသတ်မရှိ ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးရန် တိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်သည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အစိုးရအား အောက်ပါအချက်များကိုလည်း တောင်းဆိုပါသည်။
အဆိုပါ မြို့နယ် ၈ မြို့နယ်ရှိ မိုဘိုင်းအင်တာနက်လိုင်းများကို ခြွင်းချက်မရှိ စွမ်းအားပြည့် ချက်ခြင်းပြန်ဖွင့်ပေးရန်
၂၀၁၃ခုနှစ် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၏ ပုဒ်မ ၇၇ နှင့် ၇၈ တို့အား ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့အား လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများနှင့်အညီ အမြန်ဆုံး ပြင်ဆင်ရန်။
အနာဂတ်တွင်နှင့် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲကာလများတွင်လည်း ယခုအင်တာနက် ဖြတ်တောက်ခံ ထားရသော ဒေသများတွင် သော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ လက်နက်ကိုင်ပ ဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့် အခြားဒေသများ အပါအဝင် ကျန်ဒေသများတွင်သော်လည်းကောင်း ယခုကဲ့သို့ အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းများနှင့် အင်တာနက်နှုန်းလျော့ချခြင်းများ အား(လုံးဝ) မပြုလုပ်ရန်။
၁။ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှ ကန့်သတ်၊ နှောင့်ယှက်ခြင်းမခံရဘဲ အင်တာနက် အဆက်မပြတ်ရရှိရေးသည် အခြားလူ့အခွင့်အရေးများရရှိရေးအတွက် အခြေခံအခွင့်အရေးတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ထုတ်ပြန်ချက်အပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကြေညာချက် အများအပြားတွင် အထပ်ထပ်အခါခါ အတိအလင်းဖော်ပြ ထားပြီး ဖြစ်သည်။
၂။ ဇွန်လ (၂၀) ရက်နေ့တွင် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (MoTC)မှ ပြည်တွင်းရှိ မိုဘိုင်းဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် MPT ၊ Mytel ၊ Telenor နှင့် Ooredoo များထံသို့ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်များရှိ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေသော မြို့နယ်များတွင် ဇွန်လ (၂၁) ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ည (၁၀) နာရီမှစ၍ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုဖြတ်တောက်ရန်ဟူသော အမိန့်တစ်ရပ်ကို ပေးပို့ခဲ့သည်။
၃။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးသိန်းမှ အဆိုပါအမိန့်အား ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် ၂၀၁၃ခုနှစ် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ (၇၇) အပေါ်တွင် အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုပိတ်ဆို့မှုသည် ထိုဒေသများတွင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဖော်ဆောင်ထိန်းသိမ်းရန် လုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားထားသည်။
Click here to read about FEM's past work on the internet shutdown and the Telecommunications Law >>
Click here to read FEM's analysis of the Telecommunications Law >>
Tagged with: Conflict, Digital rights, MDRF, National security အမျိုးသားလုံခြုံရေး, Telecommunications Law ဆက်သွယ်ရေးပုဒ်မ
66(d) ၆၆(ဃ) Broadcasting Council Broadcasting Law Community media Conflict Constitution Coup COVID-19 Defamation အသရေဖျက်မှု Digital rights Draft law Elections Electronic Transactions Law Equality False news Gender လိင် Human rights defenders Incitement လှုံ့ဆော်မှု Interfaith Harmonious Coexistence Bill / Protection Against Hate Speech Bill Law Protecting the Privacy and Security of Citizens MDRF Media licensing Myanmar Press Council National security အမျိုးသားလုံခြုံရေး News Media Law Official Secrets Act Parliament Peaceful Assembly and Procession Procession Law Penal code ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ Police Printing and Publishing Law Privacy Protection of journalists and human rights defenders Public order Public service media Right to assembly Right to information Right to protest Supreme Court Telecommunications Law ဆက်သွယ်ရေးပုဒ်မ Union Election Commission United Nations UN Special Rapporteur Use of force Whistleblowers